'भुइँचालोले मलाई फाइदा पुर्यायो' - ;'प्रेमगीत'मा 'लभर ब्वाई' | rochak nepali khabarside
'भुइँचालोले मलाई फाइदा पुर्यायो' - ;'प्रेमगीत'मा 'लभर ब्वाई'
फिल्म 'प्रेमगीत'मा गरेको अभिनयका कारण अभिनेता प्रदीप खड्का चर्चाको तापमान वृद्धि गर्न सफल भइरहेका छन् । उनको अभिनयको तारिफ पनि भइरहेको छ । फिल्म 'ठूलो मान्छे'बाट निर्माताका रूपमा यस क्षेत्रमा भित्रिएका उनले फिल्म 'इस्केप'मार्फत अभिनयमा डेब्यू गरेका हुन् । उनीसँग अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानी:
निकै फुरुङ्ङ देखिनुहुन्छ नि !
त्यस्तो त होइन । तर, खुशी लागिरा'छ । 'प्रेमगीत' हेरिसकेपछि सबैले तारिफ गरिरहनुभएको छ । फिल्म पनि तेस्रो हप्तासम्म हलमा चलिरहेको छ । सुनेको थिएँ– 'एभ्री डग ह्याज इट्स डे ।' मलाई पनि मेरो दिन आएजस्तो लागिरा'छ । तीन दिनअघि मात्र अष्टनारायण हलमा पुग्दा फिल्म हेरेर बाहिर निस्किनुभएको एकजना महिला फ्यानले गालामै चुम्बन गरिदिनुभयो । उहाँलाई देखेर फेरि अर्कोले ओठमै चुम्बन गरेर भाग्नुभयो । त्यतिबेला चकित भएँ । यति माया गर्ने फ्यान कमाएछु भन्ने भो । कति हलमा पुग्दा दर्शकले काँधमा बोकेर उचाले पनि ।
भनेपछि सेलिब्रिटी भएजस्तो महसुस भइरा'छ ?
त्यो त होइन । पहिला मलाई दुई–चार सयले चिन्थे भने अहिले अलि बढीले चिन्लान् । त्यतिमात्र हो । मेरो बुझाइमा सेलिब्रिटी त्यो हो, जसलाई देखिँदामात्र होइन, लुक्न खोज्दाखोज्दै पनि दर्शकले चिन्छन् ।
अचेल त तपाईं कतै जानुपर्यो, कसैलाई भेट्नुपर्यो भने पनि 'प्रेमगीत'को निर्मातासँग सोध्नुुहुन्छ रे । निर्माण युनिटको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि !
मेरो घर यही ललिपुर, एकान्तकुनामा हो । मामाघर बल्खुमा छ । तर, एसएलसी दिनुअघिसम्म मैले धरहरा र पशुपतिनाथ पनि देखेको थिइनँ । म एकदमै कडा अनुशासनमा विश्वास गर्ने परिवारमा हुर्किएको हुँ । त्यसकै प्रभाव हुन सक्छ, म उहाँहरूले भनेजस्तै गरिरा'छु । मलाई विश्वास गर्नुहुने निर्माता सन्तोष सेनलाई मैले अहिले 'ड्याड'का रूपमा लिएको छु, जसले मेरा लागि करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुभयो । निर्देशक सुर्दशन थापालाई 'आमा' ठानेको छु, जसले मलाई केही फरक गर्ने चान्स दिनुभयो ।
तर, त्यसो भन्दैमा नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने छ र ?
उहाँहरू 'प्रेमगीत'को सिक्वेल बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । मेरै राम्रो सोचेर उहाँहरूले मलाई जथाभावी सार्वजनिक नहुनू भनिरहनुभएको छ । मेरो लागि उहाँहरूले ठूलो अवसर दिनुभएको हो । मसँग भएको प्रतिभा मैले उहाँहरूकै कारण देखाउन पाएको हो । त्यही भएर म उहाँहरूले भनेको कुरा मान्छु ।
'प्रेमगीत' मन पराउनेहरूले त तपाईंको प्रशंसा गर्ने नै भए । मन नपराउनेहरूले पनि तपार्इंको अभिनयको प्रशंसा गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी 'ह्यान्डल' गरिरहनुभएको छ ?
यो मेरा लागि बिलकुल नयाँ अनुभव हो । नसोचेको कुरा हो । म निकै 'कन्फ्युज्ड' भइराछु । कसैले फिल्मको प्रस्ताव गर्दा स्क्रिप्ट सुनेर निर्णय गरौँ कि नसुनी गरौँ ? सुनेर 'रिजेक्ट' गर्दा स्टार भयो भन्ने ठान्लान् भन्ने डर । नसुनी 'हुन्छ' भन्दा आफैँलाई हानि पुग्ने डर । फेसबुकमा थुप्रै म्यासेज आइरहन्छन् । रिप्लाई गरौँ त कसरी गरौँ, त्यहाँ पनि कन्फ्युजन छ । म जीवनको 'टर्निङ प्वाइन्ट'मा छु । पहिले कुनै युवतीले 'आई लभ यू' भन्दा गम्भीर ठानेर 'यस कि नो' भन्थेँ भने अहिले 'धन्यवाद' भन्नुपर्छ, भन्छु ।
अभिनय तपाईंको पुरानै रुचि हो ?
बिलकुल होइन । सानैदेखि मलाई टीभीमा अनुहार देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो । तीन–चार वर्षको हुँदा टीभीमा कसरी छिर्ने ? भनेर ममी ड्याडीलाई सोध्थेँ रे । मेरो रुचि टीभीमा देखिएर आफ्नो पहिचान बनाउनु थियो, नाम कमाउनु थियो । तर, परिवारको दबाबले मैले मार्केटिङमा एमबीए गरेँ । पढाइमा कहिल्यै सेकेन्ड भइनँ । पढ्दै गर्दा पनि 'खोजी प्रतिभाको', 'वाईवाई क्विज'जस्ता रियालिटी शोमा प्रोग्राम म्यानेजरका रूपमा काम गरेँ । कारण– मलाई टीभीमा देखिनु थियो । पछि केही सीप लागेन । अनि, आफैँ फिल्म बनाएर अनुहार देखाउने सोच बनाएँ । त्यही सोचअनुरूप फिल्म 'ठूलो मान्छे' बनेको हो । मैले त्यो फिल्ममा डान्स टिचरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, जुन मेरा लागि फिट भएन । त्यही भएर खेलिनँ । त्यसपछि 'इस्केप' बनाएँ । दुव्र्यसनमा फसेको युवाको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । दुवै फिल्म चलेनन् । तर, पनि निराश भइनँ । मेरै कमजोरीका कारण फिल्म नचलेको भन्ने ठानेँ ।
'निराश भइनँ' त भन्नुभयो, तर त्यसपछि त तपाईं फिल्म क्षेत्र छाडेर विदेश जाने तयारीमा जुटिसक्नुभएको थियो ?
हो । मैले अस्ट्रेलिया जाने प्रोसेस गरिसकेको थिएँ । त्यति नै बेला भूकम्प आयो । प्रक्रियामा बाधा पुग्यो । मैले दुःखका साथ एक–दुई ठाउँ भनेको पनि छु कि भुइँचालोले यो देशमा नचाहँदानचाहँदै फाइदा पुर्याएको कोही मान्छे छ भने त्यो म नै हुँ । किनकि, भुइँचालो नआएको भए म अस्ट्रेलिया उडिसक्थेँ । अहिलेको प्रशंसा, अहिलेको माया केही हुँदैन थियो मसँग ।
किनकि, त्यति नै बेला फिल्म 'प्रेमगीत'ले नयाँ हिरोको खोजी ग¥यो । 'इस्केप'मा प्रमुख भूमिकामा खेलिसकेको भए पनि मैले नयाँ अनुहार भएर अडिसन दिन तयार भएको बताएँ । त्यसपछि निर्देशक र निर्माताले मलाई बोलाउनुभयो । 'रहर पूरा गर्न खेल्छौ भने खेलाउँदैनौँ । तर, फिल्म क्षेत्रकै लागि केही गर्छु भन्ने भावना छ भने खेलाउँछौँ' भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो । मेरो पनि चाहना त्यही थियो । यही फिल्ममा अभिनय गरेका कारण आज मेरो करिअरले नयाँ मोड लिएको छ । अब फिल्म क्षेत्रमै केही गर्न सक्छु भन्ने हौसला मिलेको छ ।
'प्रेमगीत'मा 'लभर ब्वाई'को भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ? कतिको गाह्रो या सजिलो भयो ?
मेरो वास्तविक प्रकृतिभन्दा बिलकुल फरक खालको भूमिका थियो त्यो । फिल्ममा 'प्रेम'ले मनको कुरा खुलेर राख्न सक्दैन थियो । ऊ सहन्थ्यो । म वास्तविक जीवनमा यसको ठीक विपरीत छु । प्रेम रिसाउँदा नाच्थ्यो, म नाच्दिनँ । रिसाउँदा नाच्ने सिनमा त मैले निर्देशकलाई यस्तो पनि हुन्छ र ? भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले फिल्म 'मुन्ना भाइ एमबीबीएस'मा बोमन इरानी रिसाउँदा हाँस्थे ? त्यस्तो हुन्छ र ?' भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । अनि, मैले जे स्वाभाविक लाग्दैन, त्यो गर्न सक्नु नै अभिनेताको खुबीजस्तो लाग्यो । दर्शकले त्यो बानीलाई फिल्ममा मन पनि पराउनुभएछ । 'एकचोटि रिसाएर नाच न' भन्दै जिस्काउने पनि छन् । यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मैले सामान्य वर्कसप गरेको थिएँ । आफूलाई त ठीकै गरेजस्तो लागेको हो । अहिले आएर दर्शकले बढी मन पराइदिनुभयो ।
वास्तविक जीवनमा पनि त कसैको 'प्रेम' बनिएको होला !
अपरिपक्व प्रेम त कति भए कति । तर, साँचो प्रेम अहिलेसम्म भएको छैन । कुनै दिन होला ।
अभिनय सिकियो त ?
अहिलेसम्म त छैन । तर, अब सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । जिम र डान्स कक्षा त ज्वाइन गरिसकेँ । अभिनय कक्षा पनि चाँडै सुरु गर्ने तयारीमा छु ।
फिल्ममा प्रस्ताव कत्तिको आइरहेका छन् ?
'प्रेमगीत'को गीत रिलिज भइसकेपछि नै तीनटा फिल्मको प्रस्ताव आ'को हो । त्यसपछि छसातवटा आइसक्यो । 'प्रेम गीत'को सिक्वेलमा पनि मलाई दोहो¥याउने कुरा भइरहेको छ । त्यही भएर अरू फिल्मका लागि निर्णय गर्न सकिरा'को छैन ।
तपाईंको परिवार निकै कडा छ भन्नुभयो । अभिनयमा लाग्दा परिवार कत्तिको सन्तुष्ट छ त ?
अझै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा भविष्य छ जस्तो नै लाग्दैन । यो क्षेत्रमा लागेर आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो बलियो उदाहरण केही नभएर पनि हो । मेरो परिवारलाई विदेश जाओस्, पैसा कमाओस् र हामीलाई पनि घुमाउन लैजाओस् भन्ने छ । मलाई भने यही क्षेत्रमा भविष्य बनाउनु छ । बन्छ भन्ने पनि लाग्छ ।
कुनै कलाकार छन्, जसबाट तपाईं प्रेरित हुनुहुन्छ ?
मलाई 'टाइटानिक'का हिरो लियोनार्डो डिक्याप्रियो मन पर्छ । जसले यो पटकको अस्कर अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जित्नुभयो । उहाँको लुक्स, अभिनय र बोल्ने शैली सबैबाट प्रभावित छु । मलाई पनि उहाँजस्तै बायोपिक फिल्ममा काम गर्न मन लाग्छ । कोही योगदान पुर्याएको व्यक्तिको जीवनमाथि बनेको फिल्ममा अभिनय गर्न मन लाग्छ ।
फिल्म क्षेत्रको के कुराले तपाईंलाई बढी चित्त दुख्छ ?
यहाँ नयाँ–नयाँलाई पेल्न खोजिन्छ । जो बलियो छ, त्यसले राज गर्न खोज्ने संस्कार जहीँतहीँ छ । यहाँ पनि रहेछ । पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म नभएकालाई यहाँ एकदम गाह्रो छ । फिल्मको वितरण र प्रदर्शनमा पनि पारदर्शिता छैन, जुन दुइटा फिल्म निर्माण गर्दा मैले भोगिसकेको छु । यस्तै–यस्तै कुराले चित्त दुख्छ ।
Admin21:44:00 AM